Kashmiir: Maxaa ka dhalan kara haddii labada dal ee aadka u hubaysan uu dagaal dhexmaro? - BBC News Somali
Kashmiir: Maxaa ka dhalan kara haddii labada dal ee aadka u hubaysan uu dagaal dhexmaro?
Image caption Bar-koontaroolada qaar ayaa isu jira 50 mitir
"Marka hore rasaas ayaan is weydaarsanynaa anaga oo isticmaalayna hubka fudud iyo midka heerka dhexe,ka dib waxaa raaca hubka culus ee mootarada.
Sanooyiinkii u dambeeyay waxaan aragnay in labada dhinac ay isticmaaleen hubka culus,marka ay xaaladda cirka isku shareerto abaanduulayaasheena ayaa waxa ay la hadlaan dhigooda pakistaan si xaaladda loo dajiyo.
Waxaa sidaasi xaaladda ku qiimeeyay sargaal howlgab ah oo ka tirsanaa militariga Hindiya xilli uu ka sheekaynayay rasaasta ay is waydaarsadaan labada ciidan ee ku sugan xuduuda Kashmiir.
In ka badan hal milyan ooisugu jira ciidamada Pakistan iyo Hindiya oo ku hubaysan hubka sida wayn wax u gumaada ee Niyukleerka ayaa sheeda iska eeganaya oo isku hor fadhiya dhulka lagu muransan yahay oo goobta militariga ugu badan ay joogaan caalamka.
laba sargaal oo howlgab ah oo mid uu ka tirsanaa ciidamada Hindiya kan kalana uu ka tirsanaan jiray ciidamada Pakistaan ayaa BBC uga warbixiyay waxa ay ka dhigan tahay in laga shaqeeyo,cunno lagu cuno islamarkana la seexdo meel uu qoriga cadowga kuu muuqdo.
"Qof walba waxuu jecelyahay nabadda, nabadda waa fikir qof waliba deeqa,mararka qaar waa in aad gashaa dagaal si aad nabad u gaarto," waxaa sidaasi sheegay sargaalka Pakistaaniga.
"Waa in aad wax dishaa ama lagu dilo,ma jirta wax laga fikiro," ayuu intaa ku daray dhigiisa Hindiya.
"Xaaladda xuduuda ma aha mid dagan , waa mid halis ah oo walaac badan,waxaan isku daynaa inaan saldhigyadooda qabsano ,waxay isku dayaan iyaguna in ay kuweena qabsadaan ," ayuu yiri Korneel Muruganantham, oo ah sargaal howlgab ka noqday ciidamada Hindiya.
Lahaanshaha sawirka Col Muruganantham
Image caption Colonel Muruganantham ayaa ku sugnaa Kashmir 9 sano
"Dagaalkan waa mid aan dhamaad lahayn,cidda qabsata goobaha buuraleyda ah ayaa mar walba goobta u sareeysa ," ayuu intaa ku daray.
Kashmiir maxaa ka socdo maxayna muhiim u tahay?
Muruganantham oo ahaa sargaal da'yar ayaa la geeyay xuduuda kala qaybsa Pakistaan iyo Kashmiir qeybta ay Hindiya maamusho.
"Waxay ahayd sanadkii 1993 - xilligaasi waxay Pakistaan isku dayaysay in kooxaha mintidiinta ay ku soo riixdo Hindiya,shaqadeena dadka ku jira jiidda hore ayaa ah in arrintaas aan joojino,.".ayuu yiri Koneel Muruganantham .
"Mar walba oo dhinaca kale ay rasaas bilaabaan,waxaan ogaanaynaa in taasi ay tahay farsamo gabaad lagu siinayo mintidiinta sidaasi daraadee waa in aan fajignaanaa ."ayuu intaa ku daray.
Ku jiridda heegan sare'
Dowladda Pakistan markii taageero dhanka niyadda ah oo kali ah ayay u fidin jirtay mintidiinta,balse markii ay cadaadis caalami ah la kulantay waxay aqbashay inay qaado tallaabo ay ka qaadayso shaqsiyaadka iyo ururada masuulka ka aha weerarada argagixisada ee ka dhaca Hindiya.
Image caption Dhinac walba waxa uu tartan ugu jiraa in uu helo goobta sareysa
"Waxaa la i geeyay Kashmiir xilli ay jirtay xabbad joojin ,balse wali waan fajigneen," waxaa sidaasi BBC u sheegay Korneel howlgab ah oo Pakistaan u dhashay oo codsaday in aan magaciisa la shaacin .
Pakistan ayaa dhawaan ka mamnuucday dhamaan saraakiisha howlgabka ah inay warbaahinta la hadlaan marka laga reebo 26 sargaal oo howlgab ah oo la soo xulay.
BBC ayaa codsatay in ay la hadasho mid ka mid ah saraakiishan ,balse militariga Pakistaan ayaa diiday.
Balse sargaalkan sare ee howlgabka ah ayaa ku faraxsanaa in uu nala wadaago khibradiisa ku aadan arrintan si la mid ah dhigiisa Hindiya intii u dhaxeeysay 2006 iyo 2008,balse waxa uu doonayay in aan magaciisa la xusin.
In aad ku ag noolaato cadowga ma aha dareen wanaagsan.
Ciidamada Hindiya iyo saraakiisha da'yarta ah ayaa caadiyan ku sugnaada muddo bil ama labo bilood ah jiida hore ee cadowga.
Image caption Guri ku yaalla Pakistaan oo ay waxyeelo ak soo gaartay duqeyn
"Masaafada noo dhaxeysa waxay ahayd 150 mitir, waxaan arki karaa iyaga oo qoryaha sifeysanaya," ayuu yiri Korneel Muruganantham.
"Inkastoo cabsidu tahay wax iska caadi ah,ayaa hadana waxaa i caawiyay tababarkeyga militari in aan si degan u joogo,ma doonayo in aan cabsideyda tuso ragga aan hogaaminayo,waxaan u sheegi jiray in wax walba oo dhaca aan saldhiga ku sugnaanyno.
"Mid ka mid ah saldhigyadan ayaan habeenkii ku sugnaa anaga oo is arkayna Hindiya ,"ayuu yiri Korneelka Pakistaan.
"Waa deegaan marka aad la qabsato kaa dhigaya mid adag ."ayuu intaa ku daray
"Waxaan masuul ka ahaa ciidankeena taasina waa culays dheeraad ah."ayuu yiri
Xiisadda labada dhinac
Marka labo ciidan oo si wanaagsan u qalabaysan una tababaran islamarkana ay cadaawad ka dhaxeysa la daadgureeyo ayaa waxa si sahlan gacanta uga bixi kara xaaladda.
Image caption dadka labada dhinac ayaa sidoo kale waxyeelo la kulma
"Mar ayaa mid ka mid ah ciidamadeena waxaa uu u geeriyooday rasaas ay soo rideen Pakistaan," ayuu yiri Korneel Muruganantham.
"Waxaan qorsheynay weerar celis aan ku qaadnay saldhig noo dhawaa waxaana geysanay khasaaro ."ayuu intaa ku daray.
Marka xiisadda sidaasi sahlan ayay mar waliba cirka isuugu shareeri kartaa .
cadowga oo kali ah ma aha halista soo wajahaysa ciidamada ilaaliya xuduuda ,barafka ayaa sidoo kale ah mid halis ku ah ciidamada.
Image caption Qabowga oo aad u daran xilliyada qaar
"Burikiitada iyo qabowga ku dhaca xabadka ayaa ah dhibaato wayn oo halkaasi ka jirta.
In qof bukaan ah meesha laga qaado waxaan halis u galinaynaa 4 ah shaqaalaha caafimaadka ," ayuu yiri sargaalka Pakistaniga,waxaana arrintaas ku raacsan Korneelka Hindiya.
Waxyaabaha dabiiciga ah ayaa mararka qaar si lama filaan ah u badali kara xaalada buuraleyda.
Image caption Xilliga xagaagaha waa in ciidamada iyo qalabka la geeyaa goob aan baraf lahayn
Sanadkii 1997, Col Muruganantham ayaa waxaa la geeyay buuraleyda Shamsa barri oo ku dhaw dooxada Leepa ee kashmiir qeybta ay Hindiya maamusho.
"Waxaan xusuustaa maalinkii loo dabaaldagayay munaasabadda Diwali, waxaa da'ay roob sitey gugac islamarkana shanqarta Jacda ayaa ahayd mid daran.
"Biriqda ayaa waxay holac ka dhalisay buurta dusheeda "ayuu intaa ku daray.
Dhulka lagu muransan yahay
Muranka Kashmiir ayaa soo billaabmay ka dib markii Hindiya labo loo kala gooyay 1947.
Image caption Deerta laga taagay xuduuda
Hindiya ayaa maamusha 45.1% ka mid ah gobolka Kashmiir ,halka ay Pakistaan maamusho38.2%.,qaybta kale ee dhulkaas ayaa waxaa haysta Shiinaha.
Muranka xuduuda ee u dhaxeeya Shiinaha iyo Hindiya ee gobolka Ladakh ayaa dhaliyay xifaaltan badan oo dhanka militariga ah,basle wax dagaal ah kama dhicin tan iyo 1962.
Dhanka Hindiya iyo Pakistaan ayay xaaladu tahay mid mar walba cakiran.
30 sano ee ugu dambeeyay boqolaal askar ah ayaa labada dhinac uga dhimatay dagaal xuduud ku dhexmaray.